Inona avy ireo tsipiriany momba ny fampiroboroboana ny tranonkala amin'ny tranonkala vaovao?
Mety ho sarotra ny fampiroboroboana ny tranokala vaovao. Androany, hizara tetikady enina enina aho hampitombo ny fifamoivoizan'ny tranonkala. Ny soso-kevitra voatanisa etsy ambany dia mety amin'ny karazana orinasa samihafa. 1)
Fomba enina tsara hampiroboroboana ny tranokalanao vaovao
Eritrereto mividy mailaka amin'ny pejy Internet anao fisondrotana. Atombohy amin'ny fitomboan'ny lisitry ny fifandraisana ianao - endreinigung wohnungen.
Avy eo, mifantoha amin'ny fizarazarana ny lisitry ny mailakao. Ilaina ny manome ny hafatra tsara amin'ny mpihaino. Ny fizarana ny olona ho vondrona mifototra amin'ny fampahalalana toy ny demografika, ny tombontsoa, ​​ary ny safidiny manokana dia tena zava-dehibe. Raha manao izany ianao, dia ho mora kokoa ny manome votoaty mifanentana mba hamporisihana ireo olona mandray anjara. Ataovy antoka fa ny mailaka izay alefanao dia ahitanao ny rohy mankany amin'ny tranonkalanao mba hahafahan'ny mpampiasa miditra ao amin'ny sehatry ny segondra.
Ny tanjona voalohany amin'ny fampivoarana motera (na SEO) dia ny hanatsara ny fikarohanao ny motera organika. Araka ny mety efa fantatrao, SEO dia dingana iray feno amin'ny fampiharana fanao toy ny fikarohana karoka, ny famoronana ety anaty tranokala ary ny fananganana rohy. Amin'ny fampivoarana ny SEO, ny pejy Internet anao dia manam-bintana kokoa hiseho eo akaikin-jaton'ny valin'ny fikarohana ho an'ny fehezan-teny fototra tianao.
Ny famoronana PPC dokam-barotra dia fomba iray hafa ahafahana mampiseho ny tranokalanao amin'ny mozika karazana.
Amin'ny fampiasana Google Adwords dia ampahany manan-danja amin'ny fampiroboroboana ny tranonkala. Toy izao manaraka izao izany: lazainao amin'ny Google ny vola azonao andoavam-bola ary raha mandoa vola fotsiny ianao rehefa misarika ny dokam-barotra ny mpampiasa. Io fomba fanao io dia antsoina hoe dokam-barotra isam-bolana.
Ny sehatra media sosialy toy ny Facebook, Instagram, Twitter ary ny hafa dia fomba iray tsara hampiroboroboana ny tranonkalanao. Ireo manam-pahaizana momba ny seminera dia manome soso-kevitra fa manome tolotra tsara ho an'ny pejy fandraisana an-tsoratrao sy pejy hafa ianao ao amin'ny bios sy media sosialy misy anao.
Araka ny antontan'isa, maherin'ny iray tapitrisa ny olona mampiasa YouTube isam-bolana. Izany no mahatonga ny YouTube ho sehatra tsara ho an'ny fampiroboroboana ara-barotra. Ataovy azo antoka ny mamorona kaonty YouTube ho an'ny orinasanao ary ampidiro ny CTA ao amin'ny lahatsary misy rohy mankany amin'ny tranokalanao. Raha manao izany ianao, dia hanome toro-hevitra tsara ho an'ny mpijery ianao hitsidika ny pejy Internet anao.
Ity iray ity dia ny mamantatra ireo vohikala manokany ao amin'ny tsenan-tsenanareo ary manolotra hanoratra bilaogy vahiny ho azy ireo. Rehefa manoratra lahatsoratra iray, ataovy izay hampidirana rohy mankany amin'ny tranokalanao ao amin'ny lahatsoratra bilaogy. Diniho ny ao anatin'io bio io amin'ny faran'ny lahatsoratra. Raha tsy mihevitra ny tenanao amin'ny mpanoratra ianao, dia afaka manakarama orinasa iray orinasa SEO matihanina amin'ny mpamaky mahay.
Ny fampiroboroboana ny tranokala dia dingana arahina izay mitaky fitandremana amim-pitandremana sy fanomanana tsara. Ireo toro-hevitra voatanisa etsy ambony dia hanampy hanatsara ny fifamoivoizana ao amin'ny tranokala. Na dia tsy manome valiny avy hatrany aza ny sasany amin'ireto paikady ireto, dia ho gaga ianao raha hianatra ny fomba mora ahazoana tombontsoa bebe kokoa ary hampiroborobo ny pejy Internet anao.